ကုန်သွယ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး Forex VPS | ForexVPS® မြန်မာ
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဆာဗာကို ရွေးချယ်ပါ။
အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုတွင်အောင်မြင်ရန်သင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောဘောင်လိုအပ်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်သည် အလိုအလျောက်နှင့် အယ်လဂိုရီသမ်ကုန်သွယ်မှုအတွက် ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းမှ ပွဲစားမှ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အချိန်ကို အလွန်လျှော့ချပေးပါသည်။.
ဆာဗာ အစီအစဉ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
လန်ဒန်အခြေစိုက် Forex VPS ကို ရှာဖွေနေပါသလား။
United Kingdom (UK) တွင် သင့်ဆာဗာကို မှာယူပါ — 100% အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ အလွန်နည်းသော latency၊ MetaTrader4ကို ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်။. လျှို့ဝှက်ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။. ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများအားလုံးကို ထောက်ခံထားသည်။.
New York (USA) တွင် Forex vps ကိုရှာဖွေနေပါသလား။
NY ရှိ ကုန်သွယ်မှု vps ဆာဗာများအတွက် အထူးဖန်တီးထားသည်။. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။. လျှပ်စီးလက်ခြင်း - လျင်မြန်စွာ ကွပ်မျက်ခြင်း။. အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုနှင့် ကွန်ပြူတာ ချို့ယွင်းမှုများမှ သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ပါ။.
Singapore Forex VPS ကို ရှာဖွေနေပါသလား။
အရှေ့အာရှရှိ မြို့တော်ပြည်နယ်တွင် ရရှိနိုင်သော Virtual Private Server များ — သီးသန့်အရင်းအမြစ်များ၊ အာမခံချက်ရှိသော အလုပ်ချိန်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချိတ်ဆက်မှု၊ လုပ်ငန်းသုံး SSD နှင့် အစွမ်းထက်သော ဟာ့ဒ်ဝဲများ.
သင်၏ ForexVPS® ကို ထည့်သွင်းပါ။
နေရာကတော့ အရာအားလုံးပါပဲ။. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မြန်နှုန်းများရရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများကို အကြီးမားဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးဗဟိုဌာနများတွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။.
နည်းပညာဆိုင်ရာ Specs အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရှုပါ။
သင်၏ ForexVPS® ကိုဝယ်ပါ။ PRO. ချက်ခြင်းပင်
London တွင်စတင်သည်။ €19
New York တွင်စတင်သည်။ €19
Singapore တွင်စတင်သည်။ €19
ရွေးပါ။ အကောင်းဆုံး VPS တည်နေရာ ဘို့:
AAAFX (TripleaFX) ActivTrades AdmiralMarkets Ads securities (ADSS) Alpari Amanda Capital ArgusFX ATC Brokers AvaTrade Axiory AxiTrader BenchMark Finance BlackBull Blackwell Global Capital Index CitiFX Pro City Index CM Coinexx Core Liquidity Core Spreads Currenex Darwinex Dukascopy EasyForex Equiti Evolve Exness FBS Finotec Forex4you (eGlobalGroup) Forex.Com ForTrade FPMarkets FreshForex FTMO FXCC FXCH FXChoice FXCL (FX Clearing) FXCM FXDD FXFlat FXGlobe FxGlow FXOpen FXOptimax FXPIG FX Primus FxPro GBE Brokers GKFX Global Prime GO Hantec HF HQ Broker (CarpZoneInvest) Hugos way HYCM IC IG Infinox INGOT Interactive Brokers InterTrader Direct Invast (QuantixFS) JAFX JFD Brokers KOT4X Kridex (QuantixFS) Leverate Libertex (ForexClub) LMAX LQDFX Markets.com Mtrading Nadex OANDA OctaFX OLO Platfroms (FX Net) OneFinancialMarkets Pepperstone Purple RangeMarkets RoboForex SGT SwissMarkets TD Ameritrade FX ThinkMarkets Tickmill Traders Way Tradeviewforex UAGTrade USGFX VantageFX London VantageFX New York XM XTB XTreamMarkets Yadix (QuantixFS)
စာရင်းတွင် သင်၏ပွဲစားကို မတွေ့ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်အတွက် latency စမ်းသပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်။.
ဝယ်ပါ။ Forex VPS
ဘာကြောင့် ရွေးတာလဲ။ ForexVPS® သင့်ပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ?
FX ပွဲစားများ၏ဆာဗာများ၏အိမ်ရှင်. ပွဲစားအများစုနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု. အခြားသူများထက် latency အလွန်နည်းသည်။. သင့်ပွဲစားထံ ကုန်သွယ်မှုအမှာစာများ အဆမတန် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပေးပို့ရန် အာမခံပါသည်။.
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Tick Count
latency နည်းပါးခြင်းသည် အကူးအပြောင်းတွင် မှင်များ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း မရှိပါ။ မှတ်သားမှုတိုင်းကို မင်းလက်ခံတယ်။. ဆော့ဖ်ဝဲသည် အမှန်ခြစ်ရရှိမှသာ အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။.
latency နည်းပါးသော + ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ဟာ့ဒ်ဝဲကို အတုလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအဆင့်သုံး virtual machines များသည် tick တိုင်းကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ချော်ထွက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် ဗျူဟာမြောက်ထားရှိသော ကွန်ရက်ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။. အလုပ်ချိန်နှင့် အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်လာသောအခါတွင် အမြတ်ငွေများသည် ဤနေရာတွင် ရပ်သွားသည်။
သင်၏ Forex VPS ကို 24/7 ရယူပါ။
မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုမဆို အသုံးပြုပါ။
Forex VPS နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
စွမ်းဆောင်ရည်၊ လုံခြုံရေးနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် သင့်ပလပ်ဖောင်းကို ရွှေ့ပါ။
မည်သည့်စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများ၏ 24/7 ပံ့ပိုးမှု
သီးသန့် CPU ပါဝါ-2x Intel Xeon vCPU
RAM အာမခံပါတယ်။: 3GB
လစဉ် Bandwidth အကန့်အသတ်မရှိ
10Gbps NextPoint အမြန်နှုန်း အာမခံပါသည်။
သီးခြား IP လိပ်စာ
ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုအကောင့် 10 ခုအထိအတွက် အကြံပြုထားသည်။
Forex® VPS® ၏ ထိပ်တန်း လူကြိုက်များသော အသုံးပြုမှု6ခု။
Forex® VPS® သည် Forex ကုန်သည်များအား စက်ရုပ်များကို တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ မရပ်မနား လည်ပတ်စေပြီး တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက် ခွင့်ပြုသည်. ဤသည်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အစား သင့် EA ကို Forex® VPS® သို့ပြောင်းရန် သင်စဉ်းစားရမည့်အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။:
သင်၏ချော်လဲမှုကိုလျှော့ချပါ။. ForexVPS® သည် 4/5G GSM ကွန်ရက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အဆ ၁၀,၀၀၀ ပိုနည်းသည်.
သင်၏ ပါဝါ သို့မဟုတ် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်သွားလျှင်ပင် ဆက်လက် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ပါ။. ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် သီးခြားကင်းကင်းနေပါ။.
သင့်စက်ရုပ်ကို မည်သည့်ကိရိယာမှမဆို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။.
တည်ငြိမ်သော EA လုပ်ဆောင်မှု.
သင့်ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်း ဟာ့ဒ်ဒစ်ပေါ်တွင် ဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းနိုင်မှု။.
Forex® VPS® ကို ချက်ချင်းသုံးလို့ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ Forex® VPS® သည် Forex Traders နှင့် အလိုအလျောက် ကုန်သွယ်မှုအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော စနစ်များကို အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။. ၎င်းတို့သည် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့် terminals များနှင့် AlwaysUP အကာအကွယ်များပါရှိသည်။. သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ သင်၏ MetaTrader4အကောင့်သို့ လော့ဂ်အင်ဝင်ပါ သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုလိုသော အခြားဆော့ဖ်ဝဲကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါ.
ပံ့ပိုးပေးထားသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကား အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် PayPal၊ ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်များ၊ Skrill၊ PerfectMoney၊ ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများ၊ Western union၊ MoneyGram၊ Bitcoin နှင့် Cryptocurrencies ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံပါသည်။. သင်ပိုပေးချေပါက၊ ခရက်ဒစ်သည် သင့်အကောင့်သို့ သက်ရောက်လိမ့်မည်; ဆန္ဒရှိပါက ကြိုတင်ငွေပေးချေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။. လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုအတွက် အခြားငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများကို မကောက်ခံမီ အကောင့်ခရက်ဒစ်ကို အမြဲတမ်းအသုံးပြုပါသည်။ (လက်ရှိ PayPal စာရင်းသွင်းမှု မရှိလျှင်).
ForexVPS® ကျွန်ုပ်၏ ၀င်ငွေများကို တိုးပေးနိုင်ပါသလား။
ငွေကြေးလဲလှယ်မှုမှာ စွန့်စားရနိုင်ခြေမြင့်မားသော စီးပွားရေးဖြစ်ပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အတိအကျလုပ်ဆောင်နေမှုကို လုံးဝမျှဝေခြင်းမရှိပေ။. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား 100% တိကျသောအဖြေကို မပေးနိုင်ပါ။. အခြားသူတစ်ဦးအတွက် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာသည် သင့်အတွက် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။. အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အခြားသူများမှ လျှော့စျေးချခြင်းသည် သင့်အတွက် မှန်ကန်သည်ဟု ထင်နိုင်သည်။. ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ထုတ်ကုန်ကို အနည်းဆုံး 2-3 လအထိ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။. ပြီးရင် တွက်ပါ။ မင်းရဲ့ ၀င်ငွေ ဘယ်လောက်တိုးသွားပြီလဲ။. ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကျေနပ်မှုပေးသော ဖောက်သည်များထံမှ ရရှိသည့် တုံ့ပြန်ချက်မှာ ၎င်းတို့၏ ၀င်ငွေသည် 50% ကျော် တိုးလာသည်၊.
ForexVPS® ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အပိုဆောင်းအသိပညာ လိုအပ်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် Forex ဆာဗာများသည် သင့်ပြည်တွင်း PC ကဲ့သို့ OS တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုပါသည်။. ၎င်းတို့အား အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ 24/7 အလုပ်လုပ်သော မြန်နှုန်းမြင့် ကွန်ပျူတာဟု ယူဆပါ။. နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex VPS Starter Guide တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။.
“ForexVPS®” နှင့် “VPS” အကြား ကွာခြားမှုရှိပါသလား။
“Forex® VPS®” အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်များသည် Next Point Host LTD ဉာဏမူပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အရေးကြီးပြီး တန်ဖိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြု၍မရပါ။. ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များ ဥပမာများတွင် ကြော်ငြာခြင်း၊ ထုတ်ကုန်/ဝန်ဆောင်မှုများ ရောင်းချခြင်းနှင့် “Forex® VPS®”၊ “ForexVPS®” အမည်များကို အသုံးပြုသည့် တင်ပြမှုများ နှင့် အလားတူနည်းလမ်းများဖြင့် ရေးသားထားသော သို့မဟုတ် အသံထွက်သော ထပ်လောင်းအားလုံး ပါဝင်သည်. ဒါတွေအားလုံးကို ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးထားပြီး ကျွန်တော်တို့က ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။. “Forex® VPS®” သည် Next Point Host မှ ဖန်တီးထားသော အီလက်ထရွန်းနစ် hosting ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလိုအလျောက် ငွေကြေးကုန်သည်များမှ အသုံးပြုသည်။. ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အယ်ဂိုရီသမ်ကုန်သွယ်ဗျူဟာများ၏ ထိပ်တန်းရလဒ်များရရှိရန်အတွက် ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုကြသည်။.
“VPS” ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲ virtual machine တစ်ခုဖြစ်သည်။. ပုံမှန်အားဖြင့်၊ Linux လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့်. ၎င်းသည် ဝဘ်ဆိုဒ်၏ဖိုင်များနှင့် ဒေတာဘေ့စ်များကို သိမ်းဆည်းသည့်နေရာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ဝဘ်ဖြေရှင်းချက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။. အချို့သော ဝဘ်ဆော့ဖ်ဝဲရောင်းချသူများသည် နာမည်များကို ရှုပ်ထွေးစွာ အသုံးပြုကြသည်။. အလိုအလျောက် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် အလိုအလျောက် ငွေကြေး ကုန်သည်များကို လှည့်ဖြားရန်၊ ၎င်းတို့သည် အလိုအလျောက် ကုန်သွယ်မှုအတွက် သင့်လျော်သော ဈေးပေါသော ဆော့ဖ်ဝဲ ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူနိုင်စေရန်၊. ဒါမမှန်ဘူး.
သင်သည် နှလုံးသားဖြင့် 24/7 ရူးနှမ်းနှမ်းမြန်သော အကူအညီကို ပေးပါသလား။
ဟုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အေးဂျင့်များသည် တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်းချခြင်းအတွက် 24/7 ရရှိနိုင်ပါသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ပလက်ဖောင်းတွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောဖြေရှင်းနည်းများကို ထည့်သွင်းပြီး ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပါ။! ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပရိုဖိုင်များကို တင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်စင်တာမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်သည့်အခါတိုင်း၊ ၎င်းတို့၏ ပရိုဖိုင်ကို နည်းပညာဆိုင်ရာ နောက်ခံ၊ အတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အလိုက် သင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် နာမည်နှင့် ခေါင်းစဉ်ကို နောက်ကွယ်တွင်ထားခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကို ပိုမိုလူသားဆန်စေသည် — နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ပို၍သာယာစေသည်။
ForexVPS® တွင် ပရိုဂရမ်များကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသလား။
အပိုဆော့ဖ်ဝဲလ်များ တပ်ဆင်ခြင်းသည် သင့်စက်တွင်း PC တွင် ၎င်းကို သင်ပြုလုပ်သည်နှင့် တူညီပါသည်။ installation .exe ဖိုင်ကို run ပြီး installation wizard ကိုလိုက်နာရပါမည်။ အင်တာနက်ဖွင့်ရန်၊ အီးမေးလ်ဝင်ရောက်ရန်၊ စသည်တို့ကိုရှာဖွေရန် Chrome သို့မဟုတ် Firefox ကိုဖွင့်နိုင်ပြီး သင်လိုအပ်နိုင်သည့် မည်သည့်အက်ပ်လီကေးရှင်းကိုမဆို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သေချာပါတယ်၊ အကယ်၍ သင်သည် ကြိုတင်မပါဝင်သည့် မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုမဆို ထည့်သွင်းကူညီလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့မှ ကူညီပေးပါမည်။ တစ်စုံတစ်ခုနှင့်အကူအညီတောင်းရန် လက်မှတ်ကိုဖွင့်ပါ။
ForexVPS® နှင့် အလိုအလျောက်ကျွမ်းကျင်သော အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ။
Forex trading နှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ၊ latency ကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့် platform ချိတ်ဆက်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ကုန်သည်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်မှုအတွက် မီလီစက္ကန့်တိုင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကျွမ်းကျင်သူ အကြံပေးသည် ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်သည်။ မဟုတ်ရင် ဘာမှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ အောင်မြင်သော အော်တိုကုန်သွယ်မှုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော forex virtual private server ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် လိုအပ်သောအခြေအနေဖြစ်သည်။ Forex virtual သီးသန့်ဆာဗာတွင် ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများကို နေရာချခြင်းသည် အရောင်းအ၀ယ်နာရီများအတွင်း EA ၏နာရီပတ်ပတ်လည်ကို အသုံးပြု၍ Algorithmic ကုန်သည်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ForexVPS® နှင့် အချက်ပြမှုများ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Signal Provider များသည် ကုန်သည်များထံ အချက်ပြမှုများကို ပေးပို့ရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တူရိယာအဖြစ် forex vps ကို အသုံးပြုပါသည်။ အချက်ပြပေးသူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အချက်ပြလက်ခံသူအကြား ကွဲပြားမှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် MetaTrader4ကို Forex Virtual Private Server တွင် တည်ဆောက်နေသည်။ ၎င်းသည် ကုန်သွယ်မှုဝင်ရောက်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု သို့မဟုတ် အမြတ်အစွန်းရယူသည့်အခွင့်အရေးကို ဘယ်သောအခါမှ လက်လွတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သေချာစေသည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် အချက်ပြအဆုံးသတ် (ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူ) နှစ်ခုစလုံးသည် Forex ဆာဗာပေါ်တွင် ရှိရပါမည်။ အဆိုပါစနစ်သည် စံကွန်ပြူတာထက် များစွာပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ပျက်ကျနိုင်ခြေနည်းပါသည်။
Forex VPS ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
သန်းပေါင်းများစွာသော ဖောက်သည်များက ယုံကြည်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖောက်သည်များ၏ အမြင်များ။ အားလုံးက သူတို့ရဲ့ Forex vps ကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ latency နည်းသည်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး အကူအညီစားပွဲ။ သုံးသပ်ချက်တိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ အတွေ့အကြုံအစစ်အမှန်များသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူ၏ယုံကြည်မှုသည် နံပါတ် ၁ ဦးစားပေးဖြစ်သည်။
၅ ယောက်ထဲက ၅ ယောက်
(ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှု ၁၁၁)
အကောင်းဆုံး Forex vps 2022
18 မတ်လ 2022 တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။.
— ကိုဝင်းလှိုင်စိုး —
100% မူရင်းထုတ်ကုန်။ မြန်မာဖောက်သည်များအတွက် အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများ။ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများနှင့် 30-ရက်ငွေပြန်အမ်းအာမခံချက်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ဒီကောင်တွေက စျေးကွက်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးပါ။ အလားတူကမ်းလှမ်းလာခြင်းကို အာရှမှရွေးချယ်စရာအတုများအားလုံးကို မေ့လိုက်ပါ။ မူရင်းက ဒီမှာပါ။
Golden Myanmar Forex Trading Robot နှင့် အပြည့်အဝ လိုက်ဖက်ပါသည်။
16 မတ်လ 2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
— အာကာမိုး အာကာမိုး —
ကျွန်ုပ်၏စက်ရုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ပွဲစားနှင့် ခိုင်ခံ့သော latency နည်းပါးသော ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်သည့် အသစ်တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော နည်းပညာနှင့် အယ်လဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ အဲဒါကြောင့် Forex VPS Myanmar ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ။ အရမ်းတည်ငြိမ်တယ်!!! အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကောင်းသောအလုပ်ကို ဆက်လုပ်ပါ။
စျေးသက်သာသော Forex VPS မြန်မာစာ
11 မတ်လ 2022 တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
— ခ်စ္ခ်စ္ ေႏြး —
အလွန်မြန်ဆန်သော၊ အပြည့်အဝစီမံထားသော VPS နှင့် forex ကုန်သွယ်မှုအတွက် အထူးသီးသန့်ဆာဗာများကို စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ပေးဆောင်ထားပါသည်။ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် လောင်းကြေးများမြင့်မားသောကြောင့် သင်သည် 100% uptime အာမခံချက်နှင့် 24/7 ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
28 ဖေဖော်ဝါရီ 2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
— ဒိတ္ ဒိတ္ —
ကျွန်ုပ်သည် လအနည်းငယ်ကြာ ဖောက်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံး vps အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ကုန်သွယ်မှုအရှိန်နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို နှစ်သက်ပါသည်။ သင်၏ hosting အခြေခံအဆောက်အအုံကို အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
VPS ဖြင့် ကျေနပ်သည်။
21 ဖေဖော်ဝါရီ 2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
— Ko Gyi Aung —
ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု။ အော်ဒါမှာရတာ လွယ်ပါတယ်။ vps လက်ခံရန် အမြန်။ ကျွန်ုပ်၏ Forex vps ကို ကျေနပ်ပါသည်။
1000pip တောင်တက်သမား စုံလင်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
20 မတ်လ 2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အချိန်ပြည့်အလုပ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ forex algorithmic trading ကို စတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ "1000pip တောင်တက်စနစ်" ကိုဝယ်ခဲ့သည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲသည် အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသော ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခုတွင် အလွန်အမင်းအဆင့်မြင့်သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ပေါင်းစပ်မှုကို ပေးပါသည်။ ဖော်ပြထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန်အတွက် latency နည်းသော forex vps UK server တွင် ထည့်ထားရန် ကျွန်ုပ်အား စာရေးသူ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုကို MyFXBook မှ သီးခြားအတည်ပြုထားပါသည်။ 73% ပိုမိုအောင်မြင်သောရောင်းအား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သည် algorithm ၏အရည်အသွေးကိုယုံကြည်မှုထပ်လောင်းပေးပါသည်။
10 မတ်လ 2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
ဒီဆာဗာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကို ငါအကြံပေးမယ်။
5 မတ်လ 2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဒက်စ်တော့တွင် MT4 VPS ကျွန်ုပ်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Forex ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသည် ၎င်းနှင့်ထိုက်တန်ပါသည်။
22 ဖေဖော်ဝါရီ 2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
AvaTrade နဲ့ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဖို့ forex vps ကို ဝယ်ခဲ့တယ်။ အထောက်အပံ့သည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး တုံ့ပြန်မှုလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ MetaTrader terminal တပ်ဆင်မှုတွင် ၎င်းတို့က ကျွန်ုပ်အား ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
SpreadEx အတွက် အကြံပြုသည်။
11 ဖေဖော်ဝါရီ 2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
ကုန်သည်များအတွက် NextPointHost မှ ForexVPS® ကို အကြံပြုပါသည်။ သူတို့ရဲ့ X ချိတ်ဆက်မှု SpreadEx ပွဲစားအတွက် latency နည်းပါးကြောင်း အာမခံပါသည်။
သုံးသပ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ပါ။ >>
သင်၏ ForexVPS® အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။